लाेकप्रिय सन्देश २०७८ बैशाख २५ गते 2.45K
नेपालगञ्ज, बैशाख २५ गते । नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका वडा नम्बर १ ले कोभिड संक्रमण भई घरमै आईसोलेसनमा बसेकाहरुका लागि शनिबारदेखि चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । वडा अध्यक्ष प्रमोद रिजालको नेतृत्वमा भेरी अस्पतालका फिजिसियन डा. पारश श्रेष्ठसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोलीले संक्रमितहरुको घरघरमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिएको हो । डा. श्रेष्ठ सहितको टोलीले संक्रमितलाई आवश्यक परामर्श तथा आवश्यक औषधी समेत सिफारिस गरेको छ ।
चिकित्सकसहितको टोलीले संक्रमितको स्वास्थ्य जाँच गरि औषधी तथा एक्सरे लगायत अन्य परीक्षणको सिफारिस गरेपछि वडा कार्यालयले निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । टोलीले स्वास्थ्य तथा हाईजिन किट समेत उपलब्ध गराईरहेको छ । टोलीमा सहभागी भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धितालले वडा नम्बर १ ले गरेको कार्य सह्रानीय रहेको भन्दै यसबाट अस्पतालहरुलाई पनि राहत पुग्ने बताउनुभयो ।
संक्रमितहरुको घरमा पुगेर चिकित्सक सहितको टोलीले आवश्यक परामर्श तथा स्वास्थ्य जाँच गरेको छ । गम्भिर विरामीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रिफर तथा घरमै अक्सिजनको आवश्यकता भएमा वडा कार्यालयले अक्सिजन समेत व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । टोलीमा सहभागी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामवहादुर चन्दले गम्भिरखालका विरामीलाई आईसोलेसन तथा अन्य अस्पतालमा रिफर गरिने बताउनुभयो । वडा कार्यालयले होलस्टिक होम केयर सेन्टरको सहकार्यमा कोभिड विरामीलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको हो । वडा नम्बर १ मा करिब १५० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । यो सेवा सम्पूर्ण संक्रमितसम्म पुग्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ ।